Success isn’t by chance. It’s By Design. - Vanguard
Home » Success isn’t by chance. It’s By Design.
Success isn’t by chance. It’s By Design.
Posted by Vanguard on May 9, 2018 .
Cloud လို့ခေါ်တဲ့ အချက်အလက်သိမ်းထားသည့်စနစ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို မမှန်းဆနိုင်သည့် နည်းလမ်းများဖြင့် ဖွံဖြိုးပြောင်းလဲနေစေပါတယ်။ အဲ့ဒီနည်းပညာများကို အသေးစားနှင့် အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စနှစ် တစ်ခုတွင် အိပ်မက်ပင် မမက်ရဲခဲ့ကြပါဘူး။
ယခုအခါတွင် SAP မှ SAP Business ByDesign ဆိုတဲ့ Cloud product တွင် ယင်းနည်းပညာအသစ်ကိုသုံးပြီး စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးရဲ ့လည်ပတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေကို အသေးစိတ် စီမံခန် ့ခွဲပေးတဲ့ Enterprise Resource Planning (ERP) တွင် လည်းကောင်း၊ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာအောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့ Business Intelligence (BI) တွင် လည်းကောင်း၊ မိမိ၏ အရောင်းပိုင်းတာဝန်ကို အသေးစိတ် စီမံပေးနိုင်သည့် Customer Relationship Management (CRM) တို ့အတွက်လည်းကောင်း “စံ” စနစ်အသစ်များ ချမှတ်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများရဲ့ အတိုင်ပင်ခံကုပ္မဏီအနေနဲ့ မကြာခဏဆိုသလို အမေးခံရတဲ့ မေးခွန်းတွေထဲက တစ်ခုကတော့ SAP ဟာ အရမ်းကို အလှမ်းကွာလွန်းနေသလား ဆိုသည့် မေးခွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ် က SAP Business ByDesign သည် ယခင်သမားရိုးကျ on-premise ERP ကဲ့သို့ အဆင်မပြေမှုများ မပါဝင်ပဲနားလည်ရ လွယ်ကူရှင်းလင်း၍ ပြီးပြည့်စုံသော စနစ်များကိုတစ်နေရာတည်းတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းကြောင့် လူကြီးမင်းတို့၏ကုမ္ပဏီအတွက် အချိန်တိုအတွင်းမှာ ချဉ်းကပ်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Cloud-based Management ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်တဲ့ SAP Business ByDesign ဟာ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများမှ Customer များနှင့်ထိတွေ့ ဆက်ဆံရသည်အထိကို အချိန်မရွေး၊ နေရာမရွေးပဲ မိမိတို့ အသုံးပြုနေတဲ့ Device အားလုံးနီး ပါးတွင် သုံးစွဲနိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးပါတယ်။ ထို့ကြောင့် အလယ်၊ အလတ်အရွယ်အစား လုပ်ငန်းများ အတွက်လည်း အခွင့်အလမ်းအသစ်များကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်ပြီး အလျှင်အမြန်တိုးတက်လာဖို့ ကူညီနိုင်ရုံသာမကပဲ ရုံးချုပ်မှတဆင့် Resource များကို လုပ်ငန်းခွဲများက ဝေမျှသုံးစွဲနေရခြင်းကိုလည်း လွယ်ကူ ချော့မွှေ့ အောင် ကူညီဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
SAP Business ByDesign ဟာ လူကြီးမင်တို ့အတွက် မရင်းနှီး၊ မရင့်ကျက်သေးတဲ့ Solution တစ်ခု မဟုတ်ပါဘူး။ SAP ကုပ္မဏီဟာ ၎င်းရဲ့ နှစ်(၄၀)ကျော်အတွေ့အကြုံကို အခြေခံလို ့လုပ်ငန်းအသီးသီးအတွက် သင့်တော်မယ့် SAP Business ByDesign ကို အောင်မြင်စွာ တီထွင်ဖန်တီးနိုင်ခဲ့သည်မှာ (၁၀) နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် သင့်ရဲ ့လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာကို အဖက်ဖက်က ကူညီထောက်ပံ့နိုင်မယ့် SAP ရဲ ့Cloud solution တစ်ခုဖြစ်တဲ့ SAP Business ByDesign ကို လူကြီးမင်းတို ့အတွက် မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်။
#SAP #SAP_Business_ByDesign #Vanguard_Myanmar #ERP #Business_Software #SAP_Myanmar #SAP_Gold_Partner